के नागरिकले सरकारको विरुद्धमा बोल्न हिम्मत गुमाएका छन्? - Nepal Readers
के नागरिकले सरकारको विरुद्धमा बोल्न हिम्मत गुमाएका छन्?
- यो हप्ता, समाचार
श्रवण गर्ग। एउटा सहज जिज्ञासा छ जुन मानिसहरूले सोधिरहेका छन् – ‘अब हामीले के गर्नुपर्ला?’ विशाल देश र त्यहाँका नागरिकहरू एक अर्काबाट निरन्तर अलग भइरहेका अवस्थामा उनीहरू अब कुन दिशामा अगाडि बढ्नु पर्ला? भन्ने कुरा जान्न चाहान्छन् ।
त्यहाँ त्यस्तो कुनै त्यस्तो क्षेत्र बाँकी छैन जुन साधारण मानिसको स्वासलाई असर गर्दैन् । जसमा अभावको साथसाथ, अन्य सबैकुरा पनि तल्लो तहमा पुगेको छैन। प्रतिस्पर्धा छ कि को कति तल झर्न सक्छ । संविधान निर्माणकर्ताहरूले सात दशकअघिको अवधिमा वर्तमान परिदृश्यको कल्पना गर्न सकेकाका थिएनन्, नत्र उनीहरूले केही न केही लेख्ने थिए।
हामीले वरपरका चीजहरू तिब्र रुपमा कसरी छिटो-अगाडी बढिरहेका छन् भन्नेमा हामीले धेरै ध्यान दिएनौं। हामीले आँखा झिम्केमा पुरानो ठाउँमा नयाँ आकारहरू देखा पर्दैछन्। केवल एउटा उदाहरण लिनुहोस् … के हामीले याद गर्यौं कि मोव लिन्चिङ जस्तो घटनाहरू कसरी अचानक रोकियो, मानौं कसैले स्विच बन्द गरिसकेका छ र त्यसो नगर्न आदेश जारी गरेको छ।
यसको मतलब यो होइन कि त्यस्ता कार्यहरूमा संलग्न भएका तत्वहरूको हृदय परिवर्तन भएको छ र उ एक राम्रो व्यक्ति भएको छ। न त यो भएको छ कि विगतमा भएका घटनाहरूका अपराधीहरूलाई पर्याप्त दण्ड र पीडितको परिवारलाई राहत र न्यायको योजना छ।
प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ ले रसियाको सम्बन्धमा प्रकाशित एक अग्रभागमा हालसालै भनेको छ कि जनताको पेट भोको हुँदै गइरहेको छ, सरकारले राष्ट्रियता र निराशाबाट अलग्गै अरू केही दिन सक्दैन।
व्यक्ति पीडा महसुस गर्दैछन् कि अहिले के भइरहेको छ त्यो अझ डरलाग्दो छ। किनभने यो नयाँ खेलमा भाग लिइरहेकाहरू यो समाजका धनी मानिसहरुको समुदायसँग सम्बन्धित छ। असीमित समृद्धिको बोझमा जन्मेको यो नयाँ विद्रोह मोव लिचिङ वा धार्मिक आतंकवाद भन्दा बढी खतरनाक छ किनकि यसमा राजनीतिक संरक्षण र स्थानीय अधिकारीहरूको समर्थन छ। राजनीतिले यसलाई शक्तिको एक नयाँ हतियार बनाएको छ।
यस खेलमा असी करोड मानिसहरुको सहभागिता छैन, जो रासनको लाइनमा राखिएका छन्, जो करोडौं मध्ये बेरोजगार छन् वा उपचारको अभावले अस्पतालको सिढीमा मरेका छन्।
उत्तर प्रदेशमा आपतकालिन?
अग्रभागले यो पनि भन्छ कि सरकारहरू जसले आफ्ना मानिसहरूलाई डर प्रयोग गरेर उनीहरूको बिरूद्ध शासन गर्दछन्, तिनीहरू आफैं अन्ततः डराएर बस्न थाल्छन्। उत्तर प्रदेशमा हाल जे भइरहेको छ त्यसमा लगभग पच्चीस करोड जनसंख्याको संख्याले यो बताउँछ र यसले संकेत गर्दछ कि आपतकालिन लागू गर्न कुनै औपचारिक घोषणाको आवश्यक पर्दैन।
उत्तर प्रदेश सरकारले जारी गरेको अधिसूचनाका अनुसार अब राज्यको कुनै पनि व्यक्तिलाई मजिस्ट्रेटको अनुमति र वारेन्ट बिना नै पक्राउ गर्न सकिन्छ। अदालतले सरकारको अनुमतिबिना यस्तो कारवाही गर्ने कुनै पनि अधिकारीको बिरूद्ध संज्ञान लिन सक्नेछैन। यो विश्वास छ कि अगाडी वा पछाडी सरकारहरूले उत्तर प्रदेशबाट पनि प्रेरणा लिन सक्दछ। किनभने चिन्ता जुन देशको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्यको हुन सक्छ, अन्य राज्यहरूको पनि हुन सक्छ।
प्रश्न यो छ कि उत्तर प्रदेशको यो ‘प्रणाली’ नागरिकको सशक्तीकरणतर्फ एक कदमका रूपमा लिनुपर्दछ कि अन्य कुनै आशंका र अज्ञात डरको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ?
म केवल मेरो अघिल्लो लेख (कोरोना भन्दा बलियो कंगना ) को बारेमा धेरै साथीहरूबाट प्राप्त गरेको फरक फरक दुई प्रतिक्रिया मात्र उल्लेख गर्न चाहन्छु। दुबै समान प्रश्नहरू छन्। ग्वालियर कवि मित्र पवन करणले भने- ‘यो दुखद छ। के गर्ने! ‘र शिवपुरीका डा. महेन्द्र अग्रवालले -‘ ठीक भन्नु भयो, तर के हुन्छ?’ भन्ने प्रतिक्रिया देए।
प्रश्नहरू वैधानिक छन् र प्रत्येक व्यक्तिले यो जान्न पनि चाहान्छन् कि त्यहाँको दिमाग र अहिंसक तरिकामा क्रोध रहेको छ, यदि आक्रोश प्रकट गर्न सडक अवरुद्ध गरियो भने संवेदनशील नागरिकहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा के गर्नुपर्ला?
हामीलाई यो थाहा पाउँदा थोरै आश्चर्य लाग्न सक्छ कि संसारको एक चौथाई भन्दा बढी अर्थात ६० देशहरुमा वर्तमान समयमा नागरिकहरु आफ्नो माग वा सरकारको कामको बिरूद्ध सडकमा उत्रिरहेका छन्। यसमा तानाशाही शासन पनि समावेश छ। अमेरिकाका सबै राज्यहरूमा २५ मई भन्दा पछि यस्तो भइरहेको छ।
सरकारहरूले यसलाई सुविधाजनक पाउँदछन् कि केही मानिसहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेछन् र बाँकी चुप लागेका छन्। यसले विश्वमा सन्देश पनि जान्छ कि त्यो देशमा बोल्ने प्रतिबन्ध छैन र केही परिवर्तन हुँदैन।
यद्यपि महात्मा गान्धीले अहिंसक र शान्तिमय प्रतिकारको लागि धेरै अवसर दिएका छन्, हामीलाई उनीहरूको अनुसरण गर्न गाह्रो छ। दोस्रो, हामीसँग गान्धी जस्तो व्यक्तित्व अहिले छैन। अब यो सम्भव छैन कि केवल एक वा केही व्यक्तिहरू मात्र बोल्छन् र बाँकी मौन रहेको छ।
प्रतिष्ठित नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको क्षेत्रमा विभिन्न तरिकाहरू अपनाएको छ। यी विधिहरूले तानाशाही शासनलाई पनि असर गर्छ र प्रजातान्त्रिक सरकारहरुलाई पनि प्रतिक्रिया गर्न बाध्य पार्छ। एम्नेस्टीको पहलमा थुप्रै देशका जेलहरूमा कारागार विरोधीलाई रिहा गरिएको छ र मृत्युदण्ड पनि खारेज गरिएको छ।
एम्नेस्टीले काम गर्ने अन्य धेरै तरिकाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यसले नागरिकहरूलाई पत्र र इमेल लेख्न वा अन्य सरकार प्रमुखहरूलाई सन्देश पठाउन प्रणालीप्रति आफ्नो प्रतिरोध व्यक्त गर्न प्रेरित गर्दछ।
मिडियाले अराजकता फैलाइरहेको छ?
हामीसँग केही मिडिया संस्थाहरूको प्रश्नहरू छन्, जसले राष्ट्रिय स्तरमा अराजकता फैलाइरहेका छन्। नागरिकहरूले यो काम निरन्तर गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरू चाहन्छन भने, र उनीहरूलाई उनीहरूको विपक्ष र असहमतिको बारेमा सचेत गराउन सबै जनता, संस्था र शासनमा बसिरहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, जसले लोकतन्त्रलाई एक ठट्टा बनाएका छन्।
यदि नागरिकहरूसँग कुनै पनि प्रकारको विरोध वा असहमति व्यक्त गर्ने हिम्मत छैन भने, तिनीहरूले जे भइरहेको छ त्यो चुपचाप स्वीकार्नु पर्छ। अहिले यस्तै भइरहेको छ कि केही मानिसहरु मात्र बोल्दै छन् र बहुसंख्याक मानिसहरु मौन छन्।
(१८ सेप्टेम्वरमा श्रवण गर्गले सत्य हिन्दीमा लेखेको लेख नेपाल रिडर्सका लागि अनुवाद गरिएको हो।)